indlu 4-6 abantu lake Saint-point
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguClemence
I-Apartment ebekwe kwifama endala, imbono yechibi, kwidolophana encinci kwiindawo eziphakamileyo ze-Saint-point lake (1000 m altitude).
Ikufuphi ne-skiing-cross-country, i-snowshoeing kunye neendlela zokuhamba ze-Fuvelle (imizuzu emi-5 yokuhamba); ukuhla kwe-ski slopes (i-Métabief kunye ne-Fourgs resorts 10 imizuzu kude ngemoto), iilwandle zaseLake Saint-point (Chaon kunye ne-Malbuisson) imizuzu emi-5 ngemoto, kunye nemizuzu eyi-15 ukusuka kumda waseSwitzerland.
Indlu unalo nekhitshi kakhulu kakuhle oxhobele (eziko, microwave, induction Isitovu, extractor, ifriji) kwakunye nempahla yaso zombane ekuphekeni (oomatshini fondue kunye raclette, keyiki iqela amaninzi, ikofu, uMenzi Nespresso, iketile, ngetoaster .. .).
Umatshini wokuhlamba / umatshini wokomisa kunye nefriji ziyafumaneka kwi-cellar, ukwandiswa kwetafile; kunye nendawo yokugcina i-ski kunye nezixhobo zokuhamba intaba ...
Izixhobo zomntwana (isihlalo esiphezulu, ibhafu, ibhedi, njl.njl.) ziyafumaneka xa ziceliwe.
Umabonwakude, iincwadi, imidlalo yamakhadi, iipuzzle ziyakwenza ubusuku bakho buphile ...
Igumbi lokulala elikhulu lineebhedi ezi-2 ezingezizo eziqhelekileyo (90x200) ezinokudityaniswa zenze ibhedi yobukhulu bokumkani (180x200); encinci kunye neebhedi ezi-2 90x190 kunye negumbi lokuhlala elinebhedi yesofa eguquguqukayo eyi-130x190.
Igumbi lokulala elincinci lidityaniswe phakathi kwegumbi lokuhlambela kunye negumbi lokulala elikhulu.
Amaphepha kunye neetawuli zinokubonelelwa: i-euro eyi-15 ngomntu ngamnye.
Ukuphela kokuhlala ukucoca: i-euro ezingama-40.
Indawo yokuhlala ayinayo i-terrace okanye igadi, indalo ijikeleze ....
Ubumelwane buthandeka kakhulu kunye nengingqi yayo.
Le lali inendawo yokudlala yabantwana kunye nabantu abadala abanebala ledolophu, i-bowling alley, itafile yepikiniki .. kunye nokuvezwa okuhle kunye nombono ophefumlayo wechibi laseSaint-point.
Ukufikelela echibini ngeenyawo kuhamba ngendlela encinci yeenyawo: 10 min ngeenyawo.
Umbuki zindwendwe ngu- Clemence
Sihlala kwifama ene-terraced, evumela ukuba sikwazi ukukwamkela nangaliphi na ixesha kwaye siphendule izicelo zakho zabakhenkethi okanye ulwazi.
Ndiyathemba ukudibana nawe...
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Montperreux